Borlänge oo beenisey in ay macluumad been ah ka baahisey Soomaalida - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kulan lagu qabtey Borlänge oo Sohran Fadai ku soo bandhigey darasad uu ka sameeyey tacliinta Soomaalida degmadas. Sawirle: Warsame Elmi
Borlänge oo beenisey in ay macluumad been ah ka baahisey Soomaalida
Borlänge: waligeyn ma aanan dhahin soomalida waa analfabet
La daabacay torsdag 5 september 2013 kl 14.54
Warbaxin asbuucii hore soo baxdey ayaa lagu eedeyey Shaqaalaha dowladda Hoose iyo siyaasiinta degmada Borlänge in ay baahiyeen kuraafaad ah in Soomaalida degmadaas boqolkii 50 waxna qorin waxna aqrin. Soo saaraha warabaxintan oo la yiraahdo Sohran Fadai ayaa markuu arintan daraasad ku sameeyey heley keliya hal ruux Soomaali ah oo degmadas ku nool oo aan waxna qorin waxna aqrin.
Jan Olof Lundberg waa madaxa qaybta is-dhexgalka ee degmadaas, waxuuna iska dheereyey eeda ah in degmada Borlänge baahisey macluumaadka ah in soomaalida degmadas boqolkii 50 waxna qorin aqrina.
- Waligeyn maanan dhahin Soomaalida waa analfabet aan waxna qorin/aqrina, balse dadka soo marey labada sanno ee waaxda is-dhex-galka waxaa ku jirey boqolkii 50 oo aan wadan far ay wax ku qoraan markii ay halkan imaanayeen, ayuu yeri Jan Olof Lundberg oo degmada Borlänge u qaabilsan arimaha is-dhexgalka.
Marar badan ayey meelo kalo gedisan ka soo yeertey in Soomaalida Iswiidhen bariyahan denbe soo gasha aysan aheyn kuwo wax qora/aqriya. Gaar ahaan kuwooda dega degamda ay soomaalida aad ugu badantahay ee Borlänge. Hadaba si uu wax uga ogaado bal waxa ka jiri kara oraahdaas ayuu Sohran Fadai oo ka socda urur la dhaho Miklo daraasad ku smaeeyey arintan. Waxuuna ka waresytey 40 soomali ah xalaadooda tacliineed iyo mida qaraabadooda. Soomaalida Sohran Fadia uu sida tooska ah iyo sida dadban u darsey ayaa dhan 138 ruux oo ku nool magaaalada borlänge gobalka Dalarna. Boqolkii 36 kamid ah tacliintooda waxey gaarsiisan tahay heer dugsiga hoose/dhexe halka 41 ay gaarsiisan tahay heerka dugsiga sare iyadoo weliba boqolkii 22 tacliintooda gaarsiisantahay heer jaamacadeed. Waxuuse heley hal ruux oo aan waxna qorin/aqrin. Sohran Fadi ayaa aanmisan in degmada Borlänge aysan sawir sax ah ka heysanin xaalada tacliineed Soomaalida degmada Borlänge.
- Sidan arkey waxaa jira qaar badan oo tacliintooda aad u liidato, aad uga tacliin liita marka loo barbar dhigo dadka degmada. Waxaase yar inta aan farbaradka aheyn, waa sawirka ii soo baxey. Waxaa jira qayb weyn oo tacliintooda gaarsiinsan tahay heer jamacadeed iyo qaar tacliintooda u dhiganto dugsi sare. Sidaas weeyaan sawirka saxda ah. Sawirka ah in soomaalida boqolkii 50 yahiin kuwo aan waxna aqrin karin qorina karin ma ahan sawir xaqiiqda u dhow ayaan qabaa, ayuu yeri.
Sohran Fadia waxuu qabaa in degmada Borlänge ay ka qayb qaadatey baahinta macluumadka ah in ay soomalida analfabet yahiin madaame degmadas ayada bilowdey isticmaalka oraahdan ah analfabet.
2008 sida uu yeri Fadai sarkal ka tirsan degmadas ayaa sheegey in soogalootiga soo dega Borlänge ay boqolki 53 yahiin analfabet. Halka Jan Bohman oo ah xil-dhibaan ka tirsan golaha degmadas 2012 wargeyska Dala Demokraterna u sheegay in boqolkii 50 qaxootiga degmadas dagaa ay yahiin analfabet, isla sannadkaas gudahiisa ayaa mudane ka tisan barlamaanka Iswiidhen balse ka soo jeedan Borlänge barlamanka ka dhex sheegey sida uu yeri Fadai in degmadas qaxootiga soo degaa ay yahiin kuwo aan waxna aqrin waxna qorin, codsadeyna in xukumada dhaqaalo ku caawiso degmada. Halka wasiirka is-dhexgalka arintas uga jawaabey "suurto gal mahan in xaalada Borlänge ay ka gedisantahay xaalada degmooyinka kale ee dalka". Waana markan marka ay bilaamantey in cirka isku shareerto xanka ah Soomaalida in ay yahiin kuwo aan waxna qorin/aqrin, ayuu yeri Sohran Fadai.
- Waa markas marka xanka xowli ku socdey. Xil-dhimaan ka tirsan Sverigedemokraterna ayaa inta istaagey yeri "hadii mudane gulaha degmada Borlänge ka tirsan iyo xil-dhibaan degmadas ka soojeeda ay oranayaan boqolkii 50 waxna ma qoraan mana aqriyaan adigana wasiir aad leedahey xaalada Borlänge kama gedisana inta kale dalka: sideebey Iswiidhen uga baxi kartaa daruufa hadii dalka la soo geliyo dad badan oo aan waxna qorin aqrina".
Ruuxan markaas waxuu farta ku fiiqey oo yeri "markey ka hadlayaan soogalootida cusub waxey inta badan ka wadaan Soomaalida madaamada Borlänge dadka ay qaabisho u badanyahiin Soomaali". Ka bacdiina wargeysyada iyo shabakadaha isku tilmaama in ay dhaleeceysan yahiin soogalootiga ayaa arintaan ka dhigtey propagando ay kaga soo horjeedan ma ahan keliya Soomaalaida balse dhamaan soogalootiga guud ahaan, ayuu yeri Sohra Fadia.
Waxuuna qaabaa in mamulka degmada Borlänge uu si taxar laaan ku dheehan tahay u isticmaaley ereyga analfabet ama far aqoon la’aan. Ayada aysan jirin wax tirkoob sax ah oo sidaas muujinaya.
Ahmed Abdulkadir Cagma dhigo oo katirsan jaaliyada Soomaalida i Borlänge oo asaga ku sugnaa goob ku taala Borlänge oo Sohran Fadai ku soo bandhigey isniinta warabxintiisa ayaa sheegey in uu aad uga xunyahey in warbaxinada noocan ah laga faa’iyo Soomaalida. Asaga oo weliba ku eedeeyey bunbuuninta arinta maamulka Borlänge iyo kooxaxa cunsuriyiinta ah.
Jan Olof Lundberg u qaabilsanaha arimaha is-dhex-galka Borlänge waxa uu sheegey in degmada ay gabi ahaanba joojineyso adeegsiga oraahada Analfabet hada ka bacdii oo sharaxaada dhibatan hada ka bacdii u adeegsantoonto oraahda ah dadka ay tacliintooda aadka u liidato. Waxuuna yeri in naloo saaro dusha arintan ah Soomaalaida boqolkii 50 waa analfabet waxaa keeney tirkoobyo si qaldan laysku qasey.
- Tirokob ka hadlaya soogalootiga markey dalka imaadaan aan farbaradka aheyn iyo tirokob soomaalida soo degta Borlänge ayaa laysku qasey, waxeyna keentey in su’aalo qalad ah looga hadlo ajandeyaasha maalin laha ah.
Jan Olof Lundberg waxuu carabka ku adkeeyey in degmadiisa howlo badan u qabatey dadyowga banaanka ka jooga suuqa shaqada, hirgeliyeen ku dhawaad 200 oo shaqooyin cusub kuwas oo rajo mustaqbal u abuurtey dadyowga suuqa shaqada ka fog.